Fitandroana ny fahasalaman’ny daholobe : Nofoanana ny « Angaredona mozika Tour » eny Ambohimanga -
AccueilVaovao SamihafaFitandroana ny fahasalaman’ny daholobe : Nofoanana ny « Angaredona mozika Tour » eny Ambohimanga
Fitandroana ny fahasalaman’ny daholobe : Nofoanana ny « Angaredona mozika Tour » eny Ambohimanga
18/10/2017 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Ho fanajana ny fepetra amin’ny ady amin’ny valanaretina pesta. 5 andro mialoha, dia nofoanana ny « Angaredona mozika Tour » nokasaina hotanterahina teny Ambohimanga ny alahady ho avy izao. « Ho fitandroana ny fahasalaman’ny rehetra, ny mbola tsy fahafantarana ny fivoaran’ny toe-draharaha, dia nanapa-kevitra izahay fa ho foanana ny hetsika saika atao ny alahady izao », araka ny fampitam-baovaon’ny komity mpikarakara ny hetsika. Tafiditra tamin’ny fankalazana ny faha-37 taona nitendren-dRajery valiha, 35 taona niakarany sehatra, ary 25 taona teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena io hetsika io.
Ny teny Ambohimanga no nofoanana noho ny antony efa hiaraha-mahalala, fa mbola hitohy kosa amin’ny fotoana maha-mety azy ny « Angaredona mozika tour » amin’ny faritra samihafa eto Madagasikara. Ny fanomezana lanja ireo mozika nentin-drazana no tena tanjon’ny hetsika, ary ao anatin’izany ny fitrandrahana ireo manan-talenta any amin’ny faritra. Efa nitety faritra maro rahateo ny angaredona, loharano nipoiran’ny hetsika izay nosantarina tany Mahajanga, dia nitohy teto Antananarivo, ary ny tanànan’Ambositra no nandray azy efa ho roa taona izao.